गर्मीमा एसी र कोल्ड ड्रिंक्सको आदत छ ? छ भने तपाईं आफ्नो हड्डी आफैँ खियाइरहनुभएको छ
फरकधार / ५ असार, २०७६
बदलिँदो दुनियाँमा आधुनिक सुविधाको प्रयोग बढ्दो छ । अचेल हाम्रो जीवन प्राकृतिकभन्दा ज्यादा कृत्रिम वातावरणमा बित्न थालेको छ ।
गर्मीमा चौतारीमा बसेर चिसो हावा खाने दिन अब पुराना भइसके ।
अचेल हाम्रो अधिकांश समय कोठाभित्र बित्छ । टिभी, कम्प्युटर, स्मार्टफोनसँगै गर्मीमा एसी, पंखा र जाडोमा हिटर हाम्रा अभिन्न साथी बनेका छन् । तर, के यी सामग्रीले हामीलाई जस्तै हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि साथ दिइरहेका छन् त ?
अहँ, पटक्कै छैनन् ।
कमैलाई थाहा होला, एसीले हाम्रो शरीरको सबैभन्दा मजबुत हिस्सा हड्डीलाई नै कमजोर पारिदिन्छ । पछिल्लो एक अध्ययनले लामो समय एसीमा बस्दा एसीको हावाले विस्तारै हड्डीलाई कमजोर बनाउँदै लैजाने देखाएको छ । यसबाट कम उमेरमै हाडजोर्नीको समस्या देखा पर्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ । तपाईंमा हरसमय एसीको मजा लिने बानी छ भने सोच्नुहोस्, तपाईं आफ्नो हड्डी आफैँ खियाइरहनुभएको छ ।
तपाईं कम्प्युटर या टिभीको अगाडि लामो समयसम्म बस्नुहुन्छ, या एकैठाउँ घोत्लाएर मोबाइलमा गेम खेल्नुहुन्छ भने पनि तपाईंको हड्डीका लागि यो राम्रो होइन । लामो समय एकैठाउँ बसिरहँदा शरीर चलायमान हुँदैन, जसले हड्डीमाथि नराम्रो असर पर्छ ।
प्रकाशित मिति : असार ५, २०७६ बिहीबार २०:१९:४६,